အားဖြင့် Posted: Fisayo မတ်လ 19, 2016
wanderlust တစ်အသိနှင့်အတူပြည်သူ့လျင်မြန်စွာတစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားအချိန်များအတွက်အထူးသဖြင့်တည်နေရာမှာသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အလုပ်အပေါ်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုဖြုန်း၏အတွေးမှာညှစ်ခံစားရနိုင်ပါတယ်. ဤလူများအတွက်, အဆိုပါနယျလှညျ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့ဟာအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
သင်မကြာခဏလမ်းနှိပ်ချစ်သောသူတို့အားကလူတစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင်, အသစ်သောမြို့ကြီးများရှိအိပ်ပျော်နေသော, အသစ်သောအစားအစာများကိုမြည်းစမ်းသစ်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူ, သငျသညျကျိန်းသေသင့်ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများပေါ်တွင်သင်ကမ္ဘာကြီးကိုစူးစမ်းလေ့လာခွင့်ပြုမယ့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုလိုက်ချင်.
အကွောငျး 42% စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွားတွေစမတ်ဖုန်းကို အသုံးပြု. မိမိတို့၏ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်နှင့်ဤခွင့်ပြုထားပါတယ် hotels.ng (နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်တတ်နိုင်တဲ့အခန်းခနှုန်းထားများရှာကြံလူများအတွက်အွန်လိုင်းမှဟိုတယ်ဘွတ်ကင်န်ဆောင်မှု) ကမ္ဘာတဝှမ်းအများဆုံးသွားလာသူကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွားများအတွက်၏အမျိုးအစားကိုဆုံးဖြတ်ရန်.
ဤတွင်ထိပ်များမှာ 10 သငျသညျကမ်ဘာနိုင်ငံတွေကိုခရီးလှ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုအာမခံကြောင်းအလုပ်အကိုင်များ:
သင်တစ်ဦးအားကစားထမ်းရှာဖွေသူအဖြစ်အားကစားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူအလုပ်ဆင်းသက်ခဲ့လျှင်, သင့်ရဲ့အလုပ်ဖော်ပြချက်များအတွက် Scout နှင့်အသစ်အခွက်တဆယ်စုဆောင်းဖို့တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းအားကစားဖြစ်ရပ်များမှသွားလာရန်သင့်အားတောင်းမည်.
သငျသညျနံပါတ်များကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါနဲ့? ဘယ်လိုပိုက်ဆံဝင်ငွေ၏စိတ်ကူးသည်ကမ္ဘာ့အသံသည်လှည့်ပတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ဘဏ္ဍာရေးမှတ်တမ်းများနှင့်အခွန်အချက်အလက်ဆန်းစစ်ပါဘူး? ကောင်းသော? ထိုအခါသင်တစ်ဦးစာရင်းစစ်ဖြစ်လာသင့်တယ်!
ကမ္ဘာ့စာရင်းစစ်ခြင်းဖြင့်ကြီးထွားဖို့မျှော်လင့်ထားကြသည် 11% ရှေ့မှာ 2024, ဒီအလုပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်ကမ္ဘာ၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများမှာမှတ်တိုင်များစေရန်သင့်အားလိုအပ်သောကြောင့်.
အဆိုပါလစာကောင်းလှ၏, သငျတို့သကြောင့်မျိုးစုံ On-site ကိုအလုပ်အကိုင်မကြာခဏသွားလာရ. သင်ကိုယ်တိုင်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကိုပြီးစီးရန်အထူးတည်နေရာမှာလအနည်းငယ်ဖြုန်းရှာတွေ့စေခြင်းငှါ. သငျသညျဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့အရည်အချင်းများ၏ချက်ချင်းမန်နေဂျာဖြစ်လာမနိုင်လျှင်ပင်, သင်အမြဲထောက်ခံမှုန်ထမ်းအဖြစ်ရနိုင်.
သူတို့တစ်တွေပြဿနာရှိသည့်အခါတစ်ဦးကအကြံပေးသည်ကိုကုမ္ပဏီ၏သွားလာရင်းမှကောင်လေးသည်. သင့်ရဲ့အထူးပြုအသိပညာနှင့်အတူ, သင့်ရဲ့န်ဆောင်မှုအားလုံးတိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းလိုအပ်ပါလိမ့်မည် – နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း. ပူနွေးခြင်းနှင့် mutualistic clients များနှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေး Keeping ကိုသင်ပုံမှန်ခရီးစဉ်များအောင်တောင်းမည်.
5. တစ်ဦး Cruise နဲ့သင်္ဘောပေါ်တွင်အလုပ်
တစ်ခရုဇ်သင်္ဘောပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခရီးသွားလာခစျြတဲ့သူကလူရဲ့ထိပ်အိပ်မက်အလုပ်အကိုင်များတဦးဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်. စဉ်းစား: အိမ်သူအိမ်သားအပေါ်အစားအသောက်နှင့်အိပ်တဲ့နေရာရယူနေစဉ်သင်အခြေခံအားဖြင့်ကမ္ဘာကြီးကိုသွားလာပေးဆောင်တဲ့နေကြတယ်. ဒါဟာခဲတောင်မှခရုဇ်သင်္ဘောပေါ်တွင်သင်၏အလုပ်၏သဘောသဘာဝအရေးပါ.
သငျသညျ Bella Naija ပေါ်မှာရှိသမျှသောသူတို့သည် destination သည်မင်္ဂလာဆောင်ဓါတ်ပုံကိုသိရ? ဓာတ်ပုံဆရာဖို့ရှိပါတယ် ဖြစ် တည်နေရာအတွက်သူများရိုက်ချက်များယူ! ဘယ်လိုအေးမြသည်? အကောင်းတစ်ဦးရဲ့အရည်အသွေးကင်မရာနှင့်အလင်းရောင်နှင့်အရောင်အဆင်းအဘို့အကောင်းတစ်ဦးမျက်စိနှင့်အတူ, သငျသညျလညျးအကယ့်ကိုချိုမြိန်ဓါတ်ပုံယူစုံတွဲနှင့်အတူခရီးသွားတစ်ဦးလူနေမှုဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်.
အတော်လေးမင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံအရာကဲ့သို့, သငျသညျဖြစ်ရပ်တစ်ခုစီမံလျှင်သင်တို့အဘို့အကြီးဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောလည်းမရှိ. သငျသညျဒေသခံဖြစ်ရပ်များကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်စေခြင်းငှါ (ပါတီတွေက, မင်္ဂလာဆောင်, မွေးနေ့) ဒါပေမယ့်အစစ်အမှန်ခရီးသွားဖျော်ရည်ပွဲတော်များကဲ့သို့အအမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာဖြစ်ရပ်များစည်းရုံးရေး၌တည်ရှိ၏, ညီလာခံနှင့်ကုန်သွယ်မှုပြပွဲ.
မင်းစိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင်, သင်တစ်ဦးထိပ်တန်းအဆင့်ကြေးစားရဲ့အလုပ်အမှုဆောင်လက်ထောက်ဖြစ်ခြင်း၏အလုပ်အပေါ်ယူနိုင်ပါသည်, အရာကိုသင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးစဉ်များအတွက်သူဌေးကအနားမှာလက်ျာဘက်ခရီးသွားလာပါလိမ့်မည်ဆိုလိုတယ်! ဒါဟာသိပ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုတည်ဆောက်ဘို့ကြီးစွာသော technique ကိုဖွင့်!
9. field ဝန်ဆောင်မှုအင်ဂျင်နီယာများ
သငျသညျသွားလာရင်းမှလူတစ်ဦးဖောက်သည်တစ်ဦးတစ်ထုတ်ကုန်တပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြုပြင်အကူအညီနဲ့လိုအပ်ပါတယ်သည့်အခါများမှာ. သငျသညျတခုကနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီအတွက်လယ်ဝန်ဆောင်မှုအင်ဂျင်နီယာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျကယျြပွနျ့လေ့ကျင့်ရေးကိုခံယူခြင်းနှင့်ကမ္ဘာတဝှမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောနေရာများမှကျယ်ပြန့်ခရီးသွားလာပါလိမ့်မယ်.
10. လက်လီဝယ်သူ / ရောင်းချသူ
သငျသညျဖက်ရှင်ပစ္စည်းများကိုချစ်ပြီး wanderlust ရှိပါကဂရိတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်မှု: အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်တစ်ဦးလက်လီအရောင်းကိုယ့်ခေါ်ဆိုမှုဖြစ်စေခြင်းငှါ,. တဦးတည်းတိုင်းပြည်တွင်ရှားပါးပစ္စည်းကိုဝယ်, အခြားများတွင်ရောင်းချ!
ဒါကအားလုံးမဟုတ်ပါ! သငျသညျခရီးသွားလာကိုချစ်လျှင်သင်စဉ်းစားသင့်သည်အခြားအလုပ်အကိုင်များတစ်ဦးလေယာဉ်မယ်ဖြစ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်, နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးလုပ်သားတ, အရောင်းကိုယ်စားလှယ်, ခရီးသွားအေးဂျင့်, နှင့် ခရီးသွားစာရေးဆရာ.
1 မှတ်ချက် အပေါ် "10 ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က Round ခရီးသွားနိုင်ရန် Want အဘယ်သူသည်နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကိုအကြောင်းမူကားဂျော့ဘ်"
Kando Andi အဘိဓါန် | မတ်လ 24, 2016 တွင် 2:45 ညနေ | ပြန်ကြားချက်
သူတို့အားနိုင်ဂျီးရီးယားအဘို့အလွန်ကောင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများမှာ. အင်ဒိုနီးရှားအဖြစ်, သူတို့ကိုငါမှစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကိုပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့အားအလုပ်အကိုင်များရရှိရန်လွယ်ကူသောမဟုတ်. ကောင်းစွာ, ငါသည်သင်တို့၏နောက်လာမည့် post ကိုစောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြ. ကြေးဇူးတငျစကား